नेपाली सेना शान्ति प्रकि्रयामा किन तगारो बनिरहेको छ ? किन सैनिक जङ्गी अड्डालाई लगाम लगाउने काम हुदैन ? कसको आड भरोसामा सेनाले प्रजातान्त्रिक मुल्य र मान्यता नाघेर अभिव्याक्ति दिन्छ ? के नेपाली सेना छुटटै स्वतन्त्र निकाय हो ? सरकारको एउटा निकायको हैसियत सरकार भन्दा माथि रहन्छ भन्ने कुरा कुनै राजनैतिक शास्त्रका विधार्थीलाई ज्ञान होला ? यदि सेना सरकार भन्दा माथि रहेको अवस्था कही पनि देखिन्छ भने त्यो सैनिक सत्तामा मात्र भन्ने कसलाई थाह नहोलार ? तर नेताहरु नेपालमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका कुरा गरेर थाकेका छैनन । यस्तो प्रजातन्त्र त शायदै संसारमा होला जहाँ नयाँ संविधान निमार्ण गर्ने उच्च स्तरको प्रजातान्त्रिक विधीको प्रयोग भईरहेको छ, त्यहिको सैनिक शक्ति भने सरकारको नियन्त्रणमा छदैछैन । अझ यसो भनौ लोकतन्त्रको वकवास मुलुकमा व्याप्त छ तर थाह छैन कसैलाई, लोकतन्त्र कहाँ छ ? को सँग छ ? कस्तो छ ?
देश विखण्डन हुन्छ वा मुलुक बर्बाद हुन्छ भन्ने तर्क गरेर जंङ्गी अड्डा शान्ति प्रकि्रयामा तगारो हुनको मतलव के हो ? यो देशमा नेपालको भविश्य र राजनीती बुझ्ने नेपाली सेनामात्रै हो भन्ने अर्थ राजनैतिक दलहरुले सैनिक अभिव्याक्तिवाट बुझन सकेका छन की छैनन ? बुझेका भए सेनाले वोलेको कुरामा समर्थन जनाएर जान परर्यो र भन्न परयो हामी राजनितीमा बालक नै रहेछौ । सेनाले बोल्ने हरेक कुरामा हाम्रो समर्थन छ, होईन भने आज उचालेर कसैको विरुद्ध खनाएको सैनिक मनोवल भोली आफ्नै विरुद्धमा समेत प्रयोग हुन सक्छ भनि नबुझ्ने अदुरदर्शी दलहरु र नेताबाट केही आशा गर्न नसकिने कुरा निश्चितप्राय छ । माओवादी लडाकुको समायोजन कसरी गर्ने भन्ने कुरा सैदान्तिक रुपमा प्रष्ट छदैछ र अन्तरिम संविधानमा समेत सो कुरा उल्लेख गरिएको छ, यस्तो अवस्थामा सेना दवावको भाषामा किन हैसियत नाघेर वोल्दैछ यो अफैमा रहस्यपूर्ण र माओवादीले भन्दै आएको प्रतिक्रान्तिको सुनियोजित खेल नै त कतै होईन ? शंका गर्न पर्ने देखिन्छ ।
« लडाकू समूहगत प्रवेश असम्भवः प्रधानसेनापति आज सांझ थारुले मसाल जुलुस निकाल्ने »
Tank nath tiwari, on मार्च 13, 2010 at 6:39 अपराह्न said:
तोया सर तपाईंले लेखेको राजनितिक सम्बन्धी लेख मेरो लागि साह्रै रोचक लाग्छ ।